प्रदेश राजधानीमा नै आफ्नो घर भएरपनि घरभाडा बापत मन्त्रालायबाट मोटो रकम लिने मन्त्री र सांसद को को ? - Baikalpikkhabar
प्रदेश राजधानीमा नै आफ्नो घर भएरपनि घरभाडा बापत मन्त्रालायबाट मोटो रकम लिने मन्त्री र सांसद को को ?
– मन्त्री समेतले लिन्छन् घर भाडा बापतको रकम –
विराटनगर, साउन २५ / प्रदेश राजधानीमा नै आफ्नो घर भएरपनि केही मन्त्री र सांसदहरुले घरभाडा बापतको रकम लिन्छन भन्दा तपाइलाई अनौठो लाग्न सक्छ । तर प्रदेश एकका कतिपय सांसदहरु लाज पचाएका छन् । आफ्नो घर भाडामा लगाएर पनि मन्त्रालयबाट घरभाडा बापतको मोटो रकम कुम्ल्याइरहेका छन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयले विराटनगर बाहिरका सांसदलाई घरभाडा बापत मासिक १९ हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको विराटनगरमै घर भएर पनि सांसदहरुले घरभाडा बापतको रकम लिएको भन्दै तिब्र आलोचना भएरहेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलका नेता जयराम यादवको विराटनगरमा पक्की घर छ । यादव मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ (ख) बाट निर्वाचित हुन् । यादवले प्रदेशसभाबाट मासिक घर भाडाबापतको रकम बुझिरहेका छन् । यादवले घरभाडा बापत ४ वर्षमा ७ लाख २२ हजार ८९६ रुपैयाँ बुझेका छन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार विराटनगरमा घर भएर पनि घर भाडाबापतको सुविधा बुझ्ने यादव एक्ला सांसद भने होइनन् । नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले पनि विराटनगरमै घर भएर पनि घर भाडा बापतको सुविधा लिइरहेका छन् ।
मोरङ क्षेत्र नम्बर २ (ख)बाट निर्वाचित अधिकारीले पनि चार वर्षमा घर भाडा बापत प्रदेशसभा सचिवालयबाट ७ लाख २२ हजार ८९६ रुपैयाँ बुझेका छन् । अधिकारीको विराटनगरमा रहेको आफ्नो घर भाडामा लगाएर उनी लामो समयदेखि घर भाडामा लिएर बस्दै आएका छन् ।
विराटनगरसँग सीमाना जोडिएको ग्रामथान गाउँपालिका घर भएका नेकपा माओवादीका विजयविश्वास थारू र धनपालथान गाउँपालिका घर भएका एमालेका ज्ञानेश्वर राजवंशी, इटहरी घर भएका एमालेका सर्वध्वज सावा र लिलम बस्नेत, इनरुवा घर भएका नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला घरबाटै संसद् ओहोरदोहोर गर्छन् । तैपनि उनीहरुले घरभाडाबापत रकम लिइरहेका छन् । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको नेताको हैसियतमा कोइरालालाई सरकारले गाडी सुविधासमेत दिएको छ ।
त्यसैगरी काँग्रेसकी समानुपातिक सांसद बिन्दीया कार्कीले विराटनगरमै घर भए पनि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र ०७५/०७६ मा गरी कुल १ लाख ६१ हजार ८९६ रुपैयाँ घर भाडाबापत बुझेकी छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सांसद कार्कीले त्यसपछिका वर्षमा भने घर भाडा बापतको रकम लिएकी छैनन् ।
त्यसैगरी विराटनगरमा घर भएकी काँग्रेसकी अर्की समानुपातिक सांसद शान्तादेवी पौडेलले पनि एक आर्थिक वर्षमा घर भाडा बापतको रकम बुझेकी छिन् । उनले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा घर भाडा बापत ८६ हजार ८९६ रुपैयाँ बुझेकी छिन् । त्यस यताका वर्षमा भने उनले घरभाडाबापतको सुविधा नबुझेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी पूर्व राज्यमन्त्री समेत रहेका विजयविश्वास थारूले पनि पछिल्लो समय घर भाडा बापतको रकम बुझ्दै आएका छन् । मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ (क)बाट निर्वाचित थारुले सांसद भएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा घर भाडा बापत ८६ हजार ८९६ रुपैयाँ बुझेका छन् भने दोश्रो आर्थिक वर्षमा १ लाख ८० हजार लिएका छन् । त्यसपछिका पछिल्ला दुई वर्ष वार्षिक १ लाख १४ हजारका दरले उनले घर भाडाबापतको रकम बुझेका छन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार उनले चार वर्षको यो अवधिमा चार लाख ९४ हजार ८९६ रुपैयाँ बुझेका छन् । विराटनगरसँग सीमाना जोडिएको ग्रामथान गाउँपालिका घर भएका थारु मन्त्री हुँदाको समय सरकारले उपलब्ध गराएको सरकारी निवासमा थिए । सांसद रहँदाको समय उनी घरबाटै ओहोरदोहोर गर्छन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले घर मर्मत खर्च शीर्षकमा प्रदेशसभा सचिवालयबाट ६० हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । उनको विराटनगरमा घर भएकाले उनले घर भाडा बापतको रकम नबुझे पनि घर मर्मत शीर्षकमा सो रकम लिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
मन्त्री समेतले लिन्छन् घर भाडा बापतको रकम
प्रदेशका एक मन्त्रीले समेत घर भाडा बापतको रकम लिएको खुलेको छ । नेकपा एमालेकी प्रदेश सांसद उषाकला राई हाल सामाजिक विकास मन्त्री छिन् । तर उनले मन्त्री भएपछि पनि घर भाडा बापतको रकम बुझेकी छिन् । समानुपातिक सांसद राई गत चैत १३ गते प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्री नियुक्त भएकी हुन् ।
त्यसपछि केही समय होटलमा बसेकी मन्त्री राई गत वैशाखदेखि सरकारले उपलब्ध गराएको सरकारी निवासमा बस्दै आएकी छन्, तर पनि उनले त्यसयता वैशाख, जेठ र असार महिनाको घर भाडाबापत रकम बुझेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयबाट प्राप्त सूचीमा घर भाडा बापत उनले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २ लाख २८ हजार रुपैयाँ बुझेकी छिन् । अर्थात् उनले सांसदका लागि प्रत्येक महिना घर भाडा बापत प्राप्त हुने १९ हजार रुपैयाँका दरले मन्त्री भएपछिको तीन महिना (वैशाख, जेठ र असार) महिनाको पनि रकम बुझेकी हुन्, जबकि, यो तीन महिना उनी सरकारी निवासमा छिन् ।
तर मन्त्री राईले मन्त्री भएपछि सरकारले उपलब्ध गराएको निवासमा बस्दै आएको भन्दै घर भाडा बापतको सुविधा रकम नलिएको दाबी गरिन् । उनले यस्तो दाबी गरे पनि उनको बैंक खातामा भने गत आर्थिक वर्षको १२ महिनाकै घर भाडा बापतको रकम बुझेको देखिन्छ ।
मन्त्री राईले ‘प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीले फट्याइँ गरेका’ कारण यस्तो हुन गएको बताइन् । उनले आफु गत चैत १३ गते मन्त्री भएपछि केही समय स्थानीय होटलमा बसेको र सो होटलमा बसेको सम्पूर्ण खर्च आफैले व्यहोरेको दाबीसमेत गरिन् । वैशाखदेखि सरकारले उपलब्ध गराएको सरकारी निवासमा आफु बस्दै आएको भन्दै आफूले घर भाडाबापतको रकम नलिएको बताइन् ।
वार्षिक २ लाख २८ हजार घर भाडा
सरकारले प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा बाहिरका सांसदका लागि घर भाडा बापतको सुविधा रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा प्रति सांसद ८६ हजार ८९६ रुपैयाँ ५५ पैसा घरभाडा बापत खर्च भएको छ । आव २०७५/०७६ मा प्रतिसांसद वार्षिक १ लाख ८० हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराइएको छ । आर्थिक ०७६/७७ मा घरभाडा सुविधा बढेर वार्षिक २ लाख २८ हजार रुपैयाँ पुग्यो । ०७७/७८ मा समेत सांसदले वार्षिक २ लाख २८ रुपैयाँ बुझेका छन् । प्रदेशसभाको चार वर्षमा घर भाडाबापत ५ करोड ४७ लाख ३० हजार ३०९ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सोमबार, २५ साउन, २०७८, दिउँसोको ०४:२७ बजे